गणेशमानकै छोरो भएर मात्रै हो,नभए प्रकाशमान फुटपाथमा बसेर ममचा बेच्नेमान्छे हो : भट्टराई « Pana Khabar
गणेशमानकै छोरो भएर मात्रै हो,नभए प्रकाशमान फुटपाथमा बसेर ममचा बेच्नेमान्छे हो : भट्टराई
समय : 10:38 pm
म गणेशमानलाई अगाध श्रद्धा गर्थें । उहाँले पनि मलाई देख्नुभयो कि यो अलिकति चारित्रिक शुद्धता र वैचारिक निष्ठामा विश्वास राख्ने केटोे हो । यो केटो अलिअलि ट्यालेन्ट पनि छ र यो केटोले केही गर्छ । वीपीले पनि त्यही हिसाबले मलाई ग्रहण गर्नुभयो । त्यसकारण उहाँहरुले मलाई माया गर्न थाल्नुभयो । किसुनजीले मलाई त्यसैगरी मान्नुहुन्थ्यो । इमोसनल मान्छे भएको हुनाले गणेशमानजीसँग मेरो अलि बढी सामीप्य भयो ।
८ महिना काठमाडौंको मेयर !
पञ्चायतविरोधी अभियन्ता हरिबोल भट्टराई काठमाडौंका पूर्वमेयर समेत हुन् । यद्यपि उनी ८ महिनामात्रै मेयरको कुर्सीमा बसे ।
मेयर हुँदाको अनुभव फेरि हरिबोलकै शब्दमाः
काठमाडौं नगरपालिकाको मेयरमा मैले ०४३ सालमा जितें । ८ महिना काम गरेपछि पञ्चायतले मलाई हटायो । म आफूलाई किन मूर्ख हुँ भन्छु भने मलाई कुनै कुरामा चित्त बुझेन भने चुपलागेर बस्दिनँ । तर, म मूर्खचाहिँ हैन ।
हुन त काठमाडौंको मेयर बनेपछि मलाई देशभरिकै मान्छेले चिन्नुभयो । त्यसमाथि पनि मैले राजनीतिक अडान छाडिनँ ।
मेयर हुँदा पनि म पुस १ गतेको महेन्द्र जयन्तीमा गइनँ । बरु ८ महिनामा छाडेर फर्किएँ । नछाडेको भए गाडी चड्न त पाएकै थिएँ । तर, म त्यस्तो कुराको पछाडि लागिनँ ।
त्यसबेला किशुनजीले पनि हरिबोल, तिमीले नछाडे हुँदैन र भन्नुभएको थियो । मैले दोहोरो व्यवहार गर्न र आफ्नो निष्ठामा सम्झौता गर्न चाहन्न भनेर मेयर पद छाडिदिएँ ।
मैले छाडेपछि गणेशमानजी खुशी हुनुभयो । उहाँले यो हरिबोलको त मुखमै सरस्वती बसेको छ भन्नुहुन्थ्यो ।
हामी पामर, बेइमानहरु !
करुवा चुनाव चिन्ह लिएर काठमाडौं १ मा प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मदेवारी दिएका भट्टराई विहीबार साँझ शंखमूल नजिकै आफ्नो घरमा आराम गरिरहेका थिए । किचेनमा बुहारी यताउति गरिरहेकी थिइन् । छेउमा नाति पनि खस्याङ-खुसुङ गरिरहेका थिए ।
यस्तो ७१ वर्षको उमेरमा बूढोमान्छेलाई प्रकाशमान सिंहकै मैदानमा ओर्लेर किन चुनाव लड्नुपर्‍या होला ? तिहारका बेलामा किन नयाँ पार्टी खोल्नुपरेको होला ?
यस्तो आशयको प्रश्न सुनेपछि भट्टराई एकाएक भावुक भएर । उनीभित्र केहीमात्रामा रौद्ररुप देखिन थाल्यो । आँखा पनि गोल गोल देखिए । अनि देशको अवस्था देखेर, सहिदलाई सम्झेर उनले सोफाबाटै छोटो प्रवचन दिए-
‘अहिले हेर्नोस् न । स्वाधीनताका निम्ति मैले राजनीति गर्ने, यत्रो जीवन उत्षर्ग गर्ने, मैले नेपालीका लागि राजनीति गरेको हुँ नि, मैले त युरोपियन युनियनका लागि पनि हैन, क्रिश्चियनका लागि पनि हैन, भारतका लागि पनि हैन, चिनियाँहरुका लागि पनि हैन । कसैका लागि त हैन नि ।
म त हिजै मर्न खोज्या नि त । मेरो देशका शहिदहरुले यिनीहरुले यसैगरी विदेशीको तलुवा चाटुन् भनेर प्रजातन्त्र ल्याइदिया हो ? यसैगरी भ्रष्टाचार गरेर खाओ भने र प्रजातन्त्र ल्याइदिया हो देशका शहीदहरुले ? हँ ? के प्राणको माया कसैलाई लाग्दैनथ्यो होला ? मरेर जानु भो त उहाँहरु ।
उहाँहरुले त यो देश बडा सुनकै टुक्रा हुन्छ भनेर जानु भो नि । जनताले सुनै पाउँछन् भनेर जानु भो नि त उहाँहरु । त्यो रिस्क लिएर प्राण आहुती गर्ने एकाथरि हाम्रै दाजुभाइ, अनि हामी पामर बेइमानहरु चाहिँ भोलि मन्त्री भइन्छ भनेर विदेशीको तलुवा चाट्ने ? अनि सांसद र मन्त्री हुनका लागि अनेकथोक गर्ने ? संसदमा गएर जनताको पक्षमा नीति र कानून बनाउँछु भनेर पो जाने त, गाडी चढ्छु, पैसा कमाउँछु भनेर जानु त अपराधै हो नि । यस्ता यस्ता कुराहरुले मलाई फेरि अगाडि बढ्न घच्घच्याएको हो ।’
अब एकछिन अन्तरवार्ताको शैलीमा प्रस्तुत भइयोः
उसोभए देशको दुरावस्था देखेर तपाईलाई यो ७१ वर्षको उमेरमा चुनाव लड्ने जोश आएछ, हैन त ?
हैन, हैन । मानिसको शरीर शिथिल हुँदै जान्छ, विचार शिथिल हुँदैन । विचार र भावना भन्ने कुरा कहिल्यै सिथिल हुँदैनन् । जस्तो- आत्मा र चेतना मर्दैन भन्छन् नि । मैले अहिले आफ्नो देश र जनताप्रतिको जुन चेतनाको कुरा गरिराख्या छु, म जेबाट प्रोत्साहित र प्रेरित भएर राजनीतिमा लागें नि, त्यो त उही छँदैछ नि । यो त मर्दैन नि ।
तपाईको पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाउला त ?
थ्रेसहोल्ड कट्छ । समानुपातिकमा हामीले सयभन्दा माथि नै संख्यामा उम्मेवारी दिएका छौं । समानुपातिकमा राम्रो भोट आयो भने थ्रेसहोल्ड कटिहाल्छ ।
तपाईले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मै उम्मदेवारी दिनुको कारण के हो ?
म जन्मेको १ नम्बरमै हो । यहाँका बाटाघाटाहरु बनाउँदा लुगाभरि धूलो लगाएर ईंटा बोकेको पनि मैले यहीँ नै हो । सामाजिक कामहरु गरेको यहीँ नै हो । मुख्य-मुख्य संघसंस्थाहरुमा काम गरेको पनि यहीँ नै हो । राजनीतिक जीवन पनि शुरुवात गरेको मैले यहीँ नै हो । म जेलनेल गएको पनि यहीँ ठाउँबाट हो । ०४३ सालमा काठमाडौंको मेयर जिताउने प्रमुख मतदाताहरु यहीँ काठमाडौंकै हुन् ।
तर, यही क्षेत्रबाट गणेशमान सिंहका छोरा प्रकाशमान पनि त चुनाव लडेका छन् नि ?
(आक्रोशित हुँदै) गणेशमानको छोरा भन्नेवित्तिकै फेरि मलाई रीस उठ्छ । अघि तपाईले कमल थापाको नाम लिँदा पनि तपाईलाई कुटिदिउँजस्तो लागेको थियो ।
किन ? गणेशमानको छोरा प्रकाशमान सिंह भन्दा किन रीस उठेको ?
लिगेसी वीर्यको हुँदैन, विचारको हुन्छ । लिगेसी भनेको वीर्यको हुँदैन क्या । वीपीको विचार बोक्नेले नै उनको लिगेसी अघि बढाउने हो । गणेशमानजीको विचारलाई बोक्नेले नै उनको लिगेसी बोक्ने हो । गणेशमानको लिगेसी बोक्नेले उहाँको जस्तो त्याग र निष्ठा बोकेर हिँड्न सक्नुपर्‍यो नि त ।
के प्रकाशमान सिंह आफ्ना पिता गणेशमानको लिगेसी बोक्न योग्य छैनन् र ?
प्रकाशमानलाई म धेरै अगाडिदेखि जान्दछु । प्रकाशमानको कुनै भिजन छैन । अध्ययनशीलता छैन । उनीसँग कल्चर पनि छैन । तपाईले सुन्नुभएको छ, उनले कतै विचारको कुरा गरेको ? तल्लो स्तरमा उनी लेनदेनमा पनि छन् । सम्पत्ति भइकन पनि लोभलालच गर्ने ।
मुलुकप्रति समर्पित भएर देशलाई बलियो पार्नुपर्छ, जनताको हितको रक्षा गर्नुपर्छ र त्यसका लागि मर्नै परे पनि तयार हुनुपर्‍यो नि नेता भनेपछि । कसैले भन्छन् नि, उही गणेशमानकै छोरो भएर मात्रै हो, होइन भने फुटपाथमा बसेर ममचा बेच्नेमान्छे हो भन्छन् क्या मान्छेहरु ।
(नेपाली कांग्रेसका पुराना एवं वौद्धिक नेता हरिबोल भट्टराई काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार सँग गरेको कुराकानी अनलाइनखबर बाट लिइएको )